? SIMAHLA Osho Zen Tarot | Uqeqesho lwamakhokho kunye neempendulo ezikwi-Intanethi
1 Yintoni i-Osho Zen tarot
2 Umsebenzi weOsho wasimahla
3 I-Osho Zen Tarot-Uqeqesho lweAstral
Yintoni i-Osho Zen tarot
Nge UOsho Zen Tarot uya kujonga ngakumbi enqanaweni. Nawuphi na umnqweno esinawo ebomini bethu uya kuzaliseka. Yonke into kwindalo inokutshintshwa, yiyo loo nto thina bantu sinamandla angaphakathi okuguqulwa njengoko uMama woMhlaba wasidalayo.
Silandela ifilosofi yeZEN esekwe kukucamngca kwaseMpuma, siya kudibanisa nesiqu sethu sangaphakathi kwaye siqonde indlela yokujongana nobomi.
Nantoni na esifuna ukuyenza, kufanele ukuba ibe yeyethu, yiyo loo nto Isimahla yeOsho Zen Tarot usinika isikhokelo somoya ukufumana indlela elungileyo kuthi nokuvula iingcango zomphefumlo wethu. Ngale ndlela siza kubona ngokucacileyo nangokugqibeleleyo yonke into eyenzeka macala onke kuthi njengoko singazange sayibona ngaphambili.
Ukuba ungumntu onomdla kakhulu I-Osho Zen iya kukunceda uqinisekise ezo intuitions eziza ngequbuliso kwimini yakho nanamhlanje. Umphefumlo oyimfihlakalo oya kukwenza ubone ubunyani baloo intuition ngokuqhelaniswa kwangaphakathi.
Sinokuliqonda ixesha lethu elidlulileyo kwaye siqikelele ikamva nge itarot yendabuko, Kodwa nge-Osho yeZen Tarot yasimahla sigxila kwindlela yokuqonda okwenzekayo ngoku. Konke kunjalo bulumko, ngokomoya kakhulu. Kuza kuthi yonke into eyenzekayo ngokusingqongileyo, siyitsale ngeemvakalelo zethu kunye neengcinga.
Siza kuyiqonda ncam into eyenzekayo emphefumlweni wethu, ngaphandle kokuba nabani na akwazi ukuyenza ngaphambili.
Umsebenzi weOsho wasimahla
La Umgangatho weOsho Zen Tarot qonda nge imizobo yanamhlanje yemizobo. Ukufundwa kwamakhadi kuya kusinceda ukuba siqonde ezona zinto sizifihlileyo ezingqondweni, kwaye sibone ukuba singayitshintsha njani le nto ingaziwayo. Siza kutshintsha izimvo zethu ukuze sigxile kwinqwelomoya elungileyo kunye ne-astral.
I-Osho Zen Tarot-Uqeqesho lweAstral
Uya kuphakamisa ukuqonda kwakho ngokufunda kuka-OshoYazi umntu ophakamileyo kwaye ubuqonde ubomi bakho ngendlela engazange ibekho ngaphambili.
Inyathelo elibalulekileyo lokudibanisa, kukucamngca, kufuneka sazi iziseko, kunjani ukuphumla nokuthula. Khetha inani elidibanisa kakhulu nawe, kwaye oonobumba baya kuthetha kwaye baphendule kuwe.
Siza kusebenzisa oonobumba abangama-78 bemizobo yale mihla ukuthatha amakhadi e-tarot osho zen. Ukufundwa kwamakhadi kwenziwa nge-intuition yokuthathakhetha ikhadi kumgangatho weZen.
Uza kubhenca indalo kunye nehlabathi elimangalisayo lokuvumisa ngeenkwenkwezi nokudalwa komntu. Iinqwelomoya zemveli zisebenzisa imilo yokunxibelelana nezinto zangaphakathi okanye ulibale malunga nengaphandle lomzuzwana, ukuze ube nakho ukuziva ixesha elide. Umlingo weTarot uya kwenza konke okunye.
Las Ukufundwa kwasimahla kwamakhadi e-Osho zen kuchanekile kwaye kuchanekile. Olona kufundo luthembekileyo lwe-tarot lulapha. Ekupheleni kokufundwa kwamakhadi, uya kujonga kwinto eyenzekayo ebomini bakho, kwaye kutheni isenzeka. Uyakubona ukukhanya ekupheleni kwetonela kuyo yonke loo mibuzo ungakhange ufumane mpendulo okanye sisombululo. Unokuqikelela ikamva okanye ikamva, ngolona lukhulu ukuthembeka kwe-osho zen pdf okanye kwi-Intanethi.